Alemana amin'ny taranja Titanic: manitsy foana ary diso foana
Navoaky ny fanamoriana
Teny ao amin'ny tranokala
Nazi manohitra ny sitrapo
Ny tsy fahombiazan'ny taranaka
Mahitsy foana sy diso foana
Dokotera ao amin'ny whirlpool corona
Amin'ny ankapobeny, tsy naneho fahatokiana ny fikarakarana ny krizy corona ny vondrona mpitsabo. Zara raha nisy ny fanoherana ny hevi-diso tafahoatra ataon’ny solontenam-panjakana, fa ny fahavononana hanaraka ny hevitry ny haino aman-jery sy ny fanairana ny governemanta sy ny fanenjehana ny olona tsy vita vaksiny ary ny hanasarotra ny fiainany. Na ny fitakiana ny fanaovana vakisiny ny zaza aza dia nanafintohina ihany ny dokotera vitsivitsy.
ny Alexander Brandenburg, taloha Herinandro 3 5. Novambra 2021
Ny fahalalahan'ny olombelona, ​​ny fanandramana ara-pitsaboana ary ny Code of Nuremberg Doctors
Nahoana no tsy tandremana intsony ny tolo-kevitry ny Code Nuremberg? Tsy misy dikany intsony ve ny lesona tamin'ny taonan'ny Nazia? Miverina amin’ny androm-boninahitra sa fitiavam-bola fotsiny? 1. Ny fanekena an-tsitrapo ataon'ny taranja fitsapana dia tena ilaina. Midika izany fa ny Tohizo ny famakiana…
ny Alexander Brandenburg, taloha Volana 1 29. Oktobra 2021
Zava-misy momba ny fahamarinana Corona (avy amin'ny taratasy ho an'ny tonian-dahatsoratra)
Ny zavatra rehetra nolazain'ny mpanao politika tamin'ny antoko taloha momba an'i Corona hatreto dia lasa lainga: voalaza fa rehefa nanao vaksiny izahay dia tapitra ny valan'aretina. Avy eo, rehefa vita vaksiny ny 50 isan-jato dia tapitra ny areti-mifindra. Tohizo ny famakiana…
Fihetseham-po maitso: ny kowtow an'i Habeck
Tsy misy olona mikasa ny hanafoana ny demokrasia! (taorian'i Walter Ulbricht)
Ny fitondrana ara-pahasalamana corona an'ny governemanta, izay nipoitra avy amin'ny demokrasia misy antsika, dia mety hitarika amin'ny fifindrana mankany amin'ny fanjakazakan'ny toetr'andro efa fanao na amin'ny fitovian'ireo endrika fitondrana tsy refesi-mandidy roa.
Iza no nandresy tamin'ny fifidianana?
Ny itovizan'ireo olona tena manandanja ireo dia ny fahaizany mamikitra, ny fahaizany miavaka ary ny tsy fahampian'ny fitsipika. Tsy nisy tamin'izy ireo sahy nanohitra ny politikan'i Merkel tao anatin'ny fotoana iray monja.
ny Alexander Brandenburg, taloha 2 volana 28. September 2021
Ny hadalan'ny vaksiny dia mitazona ny ankizy
Ny paikady fanaovam-baksiny apetraky ny governemanta ho an'ny zaza sy ny adolantsento ary ny fananganana ny ray aman-dreny dia ao anatin'ny ezaka havia maintso hamongorana ny fianakaviana amin'ny asany sy ny asany teo aloha ary ny hikarakarana ny ankizy tsy ho azon'ny ray aman-dreny (fanambadiana ho an'ny rehetra / Politika fandaharana / politika vitsy an'isa).
ny Alexander Brandenburg, taloha 3 volana 17. Aogositra 2021
Ho an'ireo tsy voamarina
Aza matahotra. Mampiseho faharetana sy fahamendrehana ary finiavana ianao. Hivory ao amin'ny vondrom-piarahamoninao ianao, hanao drafitra hifanampiana, ary hiaro ny maha-tompon'andraikitra ny siansa sy ny fahalalahana maneho hevitra izay tena ilaina amin'ny fivelaran'ny fiarahamonina.
ny Alexander Brandenburg, taloha 4 volana 14. Aogositra 2021
Mampiharihary izany ny fiainana isan'andro: manana mpilatsaka an-tsitrapo ny mpitondra. Tsy voatery ho polisy vao mazoto mihetsika. Nantsoina hoe Blockwart io taloha!
ny Alexander Brandenburg, taloha 4 volana 2. Aogositra 2021
Tsy isika no AfD, saingy mazava ho azy fa akaiky azy isika noho ny faharesen-dahatra. Ary amin'ny maha-antoko tsy miankina ahy dia manohana ampahibemaso aho fa mifidy ny AfD, satria mijoro sy mihetsika mifototra amin'ny Lalàna Fototra izany. Raha tsy izany dia tsy hifidy ho azy ireo aho ary tsy hitarika ity fototra ity koa. Ny AfD dia mitory ny fepetra ankehitriny amin'ny fiarovana ny lalàm-panorenana noho ny antony marim-pototra. Ny fomba fanombanana azy amin'ny fomba matihanina, dia ho resin'ny governemanta federaly aorian'ny fizotran'ny taona maro. Ary tsara izany!
ny Alexander Brandenburg, taloha 4 volana 27. Jolay 2021
Fanamarihana: automatique ny fandikana ity pejy ity ary mety hiteraka hadisoana kely amin'ny fiteny semantika na fanambaràna colloquial.
ny fankahalàna Jiosy
Alemaina Atsinanana Merkel
Cartél of doom
Ankizy sy ankohonana
ity sy ity
© Copyright 2019 | Alemana amin'ny fianarana Titanic